Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCharles
Ikhabhathi encinci esemgangathweni ekwaziyo ukulala ukuya kutsho kwiindwendwe ezili-11 ezinekhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlamba impahla. Igumbi lokuhlambela elinye ngaphakathi kwindlwana kunye neyesibini ebekwe kunye nempahla. Ikwindawo efanelekileyo yokuzonwabisa yangaphandle. Ukuphuma nje kumzila kaLouis noClark kunye nomlambo we-bitterroot ngaphesheya kwesitrato. Ihlathi lesizwe likufuphi kwaye linokufikelela ngokulula. Izilwanyana zasendle eziquka ielk, amaxhama, ibhere, kunye neegusha ezineempondo ezinkulu zihlala zibonwa kule ndawo. Umlambo we-bitterroot ubonelela ngokuloba ii-trout ezilungileyo kakhulu.
Undwendwe kufuneka beze nezinto zabo zangasese kunye nezinto ezisetyenziswayo njengeetawuli zephepha kunye nesepha yokuhlamba. Zikhona iindawo zokulala neetawuli. Igrill yombane yangaphandle iyafumaneka ukuze undwendwe lusetyenziswe.
Ikwindawo efanelekileyo yokuzonwabisa yangaphandle. Ukuphuma nje kumzila kaLouis noClark kunye nomlambo we-bitterroot ngaphesheya kwesitrato. Ihlathi lesizwe likufuphi kwaye linokufikelela ngokulula. Izilwanyana zasendle eziquka ielk, amaxhama, ibhere, kunye neegusha ezineempondo ezinkulu zihlala zibonwa kule ndawo. Umlambo we-bitterroot ubonelela ngokuloba ii-trout ezilungileyo kakhulu. ILost Horse ski resort ingaphantsi kwemizuzu engama-30 kude.
Undwendwe lungaqhakamshelana nam nangaliphi na ixesha